७७ जिल्लामध्ये रसुवामा मात्र किन छैन कोरोना? - समय-समाचार
७७ जिल्लामध्ये रसुवामा मात्र किन छैन कोरोना?
९ असार २०७७, मंगलवार ०५:३७
सोमबार सम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा रसुवाबाहेक सबै जिल्लामा कोरोना भारइसको संक्रमण देखिएको छ। अब संक्रमण देखिन ७७ वटा जिल्लामध्ये रसुवामात्र बाँकी छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तका अनुसार अब क्वारेन्टिनमा रहेका ४९ जनामध्ये १७ जनाको रिपोर्ट आउँन बाँकी छ।
‘उहाँहरूको पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आए तत्काललाई जिल्लामा संक्रमण छैन भन्ने नै हो,’ उनले भने।
अहिलेसम्म रसुवामा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या २ सय ९९ छ। तीमध्ये कोही भारत, तेस्रो मुलुक र जिल्ला बाहिरबाट आएका हुन्। रिपोर्ट आउन बाँकी १७ जनाबाहेक सबैलाई होम-क्वारेन्टिनमा पठाइएको छ।
रिपोर्ट आउन बाँकी रहेका १७ जना कोही भारत, बंगलादेश, कुवेत र साउदीबाट आएकाले उनीहरूमा संक्रमण हुनसक्ने बताउँछन् पन्त।
‘सबै आयातित केस भएकाले संक्रमण देखिएला कि भन्ने पनि छ। तर अहिलेसम्मको परीक्षणमा भने बाहिरबाट आएकाको पनि नेगेटिभ नै आएको छ,’ उनले भने।
स्थानीय तहहरूको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका एक हजार ९ सय मानिस भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा छन्। तीमध्ये भारत, तेस्रो मुलुक र बाहिरी जिल्लाबाट आएका ५ सय १२ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ। त्यसमा पनि ११ जनाको पोजेटिभ देखिएको र पछि पिसिआर परीक्षणमा कसैमा पनि संक्रमण नदेखिएको पन्तले जनाए।
अझै २ सय मानिस घर आउनसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ।
प्रजिअ पन्तले भने, ‘तीमध्ये ५० जना आइसक्नुभएको छ। अब डेढ सय आउनसक्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। साथै त्यहीँ अनुसार क्वारेन्टिन लगायत व्यवस्थापनमा जुटेका छौं।’
जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहमा जम्मा ३ सय २ जनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्वारेन्टिनस्थल छ।
जिल्ला अस्पतालमा १५ वटा गरेर जम्मा ५० बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार छन्। अहिलेसम्म १३ जना आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको भए पनि उनीहरू कसैमा संक्रमण नदेखिएको पन्तले जनाए।
उनले सबै स्थानीय तहमा रहेका क्वारेन्टिनहरूलाई सामाजिक दूरी कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको बताए।
‘हामीले क्वारेन्टिनहरूमा शौचालय र बस्ने व्यवस्था राम्रो गरेका छौं। साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था सबै गरेका छौं। अहिलेसम्म कसैले पनि क्वारेन्टिन बसाइका क्रममा गुनासो गर्नुभएको छैन,’ प्रजिअ पन्तले भने।
उनले स्थानीय तहको चार वटा विद्यालय र सरकारी भवनलाई क्वारेन्टिन बनाइएको बताए। साथै ती क्वारेन्टिनस्थलमा आवश्यक परेको बेला तुरून्त खटिन सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको समेत सहज व्यवस्थापन गरिएको उनले जनाए।
जिल्लामा विदेशबाट आउने मानिस कम भएकाले पनि संक्रमण नदेखिएको हुनसक्ने पन्त बताउँछन्।
तर आयातिक केसमा संक्रमण नदेखिए पनि लकडाउन खुकुलो भएका कारण संक्रमण जोखिम भने रहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले आयातित केस नभए पनि समुदायमा कतै फैलिने हो कि भनेर त्यही अनुसार तयारी गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र आमा समूह लगायत गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत अहोरात्र काम गरिरहनुभएको छ।’
उनले स्थानीय तहलगायत आमा समूहहरू समेत मानिसहरूमा सचेतना फैलाउन सक्रिय भएकालले संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुगेको बताए।
बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र प्रवेश गराउने गरिएको पन्तले जनाए।
त्यसबाहेक लकडाउनलाई पहिलो चरणमा खुकुलो पार्ने नीतिसँगै सबै सेवा सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
चीनसँग जोडिएको रसुवागढी नाका पनि गत माघ १५ देखि नै बन्द रहेकाले चीनबाट मानिसहरूको आवतजावत ठप्प छ।
अहिले भारतलगायत तेस्रो मुलुकसँग बढी मानिसहरूको आवतजावत रहेको ठाउँहरूमा संक्रमण बढी देखिएको छ। यसै पनि यी ठाउँमा रसुवाका कम मानिस रहेकाले आयातित केसबाट संक्रमण फैलिने सम्भावना कम छ। बरु बाहिर जिल्लाहरूसँग हुने आवतजावतले जिल्लामा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको देखाउँछ।
प्रजिअ पन्तले अहिलेसम्म शून्य संक्रमित रहे पनि भोलि संक्रमण देखिएको अवस्थामा सामना गर्न सोही अनुसार तयारीमा जुटेको बताए।